Notoloran'i: Kaitlin Justice
Ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2019 dia naneho fa 70% mahery ny Amerikanina no mankasitraka ny fanajanonana ara-dalàna ny rongony. Nandritra ny taona maro, fikarohana bebe kokoa no nanasongadina ny tombontsoa azo avy amin'ny rongony sy fitsaboana amin'ny rongony. Vokatr'izany dia olona an-tapitrisany manerantany no miantehitra amin'ny famoahana hemp hitsaboana aretina sy olana isan-karazany. Ny indostrian'ny rongony dia nanjary sombin-tsarin'ny fitsaboana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana. Mihamaro ny olona mifindra amin'ny fanafody hafa toy izany, noho ny fananana rongony mahery. Ny rongony dia miasa ho toy ny fanafody voajanahary amin'ny aretina maro, manomboka amin'ny tebiteby sy tsy fahitan-tory ka hatrany amin'ny fanaintainan'ny hozatra sy ny fivontosana. Na izany aza, maro no mbola tsy mahazo ny vokatra hemp ary mahita azy ireo ho toy ny faharatsiana na fandrahonana eo amin'ny fiaraha-monina. Ny adihevitra momba ny fanarahan-dalàna ny marijuana any Etazonia dia ampahany lehibe amin'ny fifidianana eo an-toerana ary na dia ny filoham-pirenena aza. Ity misy topy maso amin'izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny tohan-kevitra ny ara-dalàna ny marijuana.
Fepetran'ny lalàna ankehitriny
valo ambin'ny folo avy amin'ny fanjakana dimam-polo ao Etazonia no nanangana marijuana ho ara-dalàna, saingy mbola tsy ara-dalàna amin'ny ambaratonga federaly izany. Etsy ankilany, enina amby telopolo amin'izy ireo no mamela ny varotra sy ny marketing marijuana ara-pitsaboana. Noho izany, misy ny fanerena na fanerena hanamafy ny ara-dalàna rehefa jerena ny fanjakana ara-dalàna amin'ny rongony ankehitriny. Nandritra izay taona vitsy lasa izay, samy nahita fanerena lehibe ho an'ny ara-dalàna i Eropa sy i Amerika Avaratra. Ny iray amin'ireo antony voalohany mahatonga an'io fanerena io dia ny porofo mivaingana manasongadina ny fananana fanafody sy fitsaboana amin'ny rongony.
Ho fanampin'izany, ny volavolan-dalàna momba ny fambolena 2018 dia nanampy tamin'ny fananganana ara-dalàna ny vokatra hemp izay misy ambany noho ny 0.3% THC. Tetrahydrocannabinol, fantatra amin'ny anarana hoe THC, no fitambarana simika tompon'andraikitra amin'ny fahamamoana mifandraika amin'ny rongony. Bitro Mainty ary ny mpanamboatra hafa dia mamoaka cannabidiol sy THC amin'ny rongony sy zavamaniry hemp. Na dia manana fifantohana THC avo kokoa aza ilay voalohany, ity farany dia karazana indostrialy rongony izay misy CBD bebe kokoa.
Fitsipika momba ny fanamafisana ara-dalàna ny Marijuana
Voalohany, ny rongony na rongony dia misy fitambarana maro izay manana toetra fitsaboana sy fitsaboana isan-karazany. Noho izany, ny vokatra toy izany dia mihoatra ny akora fialam-boly fa tsy tombontsoa ara-pahasalamana mahery vaika. Ohatra, ny Food and Drug Administration dia nankato ny fanafody voalohany miorina amin'ny CBD antsoina hoe Epidiolex amin'ny fitsaboana epilepsy zaza.
Fanadihadiana bebe kokoa no nanasongadina ny fomba ahafahan'ny rongony tena zava-dehibe amin'ny ady amin'ny soritr'aretina simika. Ny vokatra misy fitrohana hemp dia afaka manampy ny mararin'ny homamiadana miatrika ny maloiloy, mandoa ary ny fanaintainan'ny hozatra. Koa satria voajanahary sy voajanahary ireo vokatra ireo, dia safidy azo antoka sy maharitra kokoa raha ampitahaina amin'ny benzodiazepines toa Ativan.
Ny olombelona dia miankina amin'ny rongony sy rongony mba hitsaboana aretina isan-jato. Na dia an'arivony taona lasa izay aza, ny tompon-tany eran-tany dia nampiasa rongony hampihena fanaintainana, hampihena ny fivontosana ary hiala sasatra. Vokatr'izany, ny rongony dia ampahany lehibe amin'ny tantaran'ny fitsaboana voajanahary an'ny sivilizasiôna samihafa manerantany.
Isan-taona dia manao bemidina sy fisamborana poti mahery maherin'ny 600,000 ny sampan'ny polisy amerikana, mitentina amina miliara dolara ny fotodrafitrasa ara-pitsarana eto amintsika. Ny loharano midadasika toy izany, na vola, fotoana na ezaka, dia azo ampiasaina tsara any an-kafa. Alao an-tsaina ange raha toa ka mametraka vola sy fotoana mitovy amin'izany ny governemanta amin'ny fisorohana ny fanolanana na heloka bevava mahery setra hafa.
Ny fandraràna ny zavatra simika toy ny rongony dia mitarika amin'ny fivelarana tsena ambanin'ny heloka bevava sy tsy ara-dalàna. Na dia natao hampihenana ny fanjifana sy fampiasana aza ny rongony rongony tsy ara-dalàna tamin'ny 1930 dia nanjary ny mifanohitra amin'izay, nampalaza ny zava-mahadomelina. 90 taona taty aoriana dia mbola mitohy ny ady hevitra raha mipoaka ny fampiasana rongony ao amin'ny firenena.
Saika ny olona maniry hampiasa marijuana izao dia afaka mahita izany. Ny hany mampiavaka ny rongony sy ny alikaola dia ny tsy ahafahan'ny governemanta mandoa hetra, manandrana na mifehy an'ity farany. Tsy miantraika amin'ny kalitaon'ny vokatra eny an-tsena fotsiny izany, fa miteraka fatiantoka ara-bola ho an'ny governemanta ihany koa.
I Etazonia dia malaza amin'ny fomba fisainana malalaka sy ny fanasongadinana ny fahalalahana samirery. Vokatr'izany, ny Amerikanina rehetra dia mendrika ny hitady ny fahasambarany raha mbola tsy manisy ratsy olona hafa izy ireo. Noho izany, ny olona dia tokony hanana fahalalahana mividy, mividy ary mampiasa marijuana raha maniry izany nefa tsy mandika lalàna. Ny fandraràn'ny rongony dia manitsakitsaka ireo zony ireo amin'ny tsy famelana ny olona hampiasa zavatra iray izay afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fiainany.
Ny lalàna momba ny fandrarana napetraka amin'ny fanjakana maro dia manome fahefana amin'ny manampahefana hisambotra olom-pirenena manara-dalàna sy mendrika. Manan-jo hijanona sy hikaroka olona amin'ny fotoana rehetra ny polisy raha mampiahiahy, ka manasarotra ny toe-javatra ho an'ireo izay maniry hampiasa rongony. Vokatr'izany, rehefa nandeha ny fotoana, ny ady amin'ny rongony dia nivadika ho fanenjehana ireo mahantra sy sahirana.
Raha ny lafiny tsara amin'ny fananganana ara-dalàna dia afaka mamorona vola miditra sy fanampiana bebe kokoa amin'ny fampiasana olona an-tapitrisany izy. Ny indostrian'ny rongony nahazo alàlana avy amin'ny fanjakana dia efa mitentina $ 10.73 miliara ary manome asa ho an'ny olona 243,000 mahery any Etazonia. California dia nanangona 300 tapitrisa dolara ho hetra amin'ny taona faharoa nananganana ara-dalàna ary nahazo $ 635 tapitrisa ho fidiram-bola.
Tombony lehibe iray hafa omen'ny fanamafisana ara-dalàna ny fiantohana ireo vokatra eny an-tsena ho azo antoka sy hadio. Amin'ny famoahana lalàna momba ny fivarotana sy fanamboarana vokatra toy izany, ny fanjakana dia afaka mamantatra sy manatsara ny fiarovana ny vokatra. Ny fananana lalàna mifehy ny fividianana, ny fanodinana, ny fitrandrahana ary ny fanamboarana vokatra dia hitarika fari-pahadiovana sy kalitao tsara kokoa eo amin'ny sehatry ny indostria.
Fandresen-dahatra manohitra ny fanaovan-dalàna
Ny ankamaroan'ny adihevitra ampiasaina hisorohana ny lalàna marobe momba ny fivarotana rongony dia tsy misy dikany. Ohatra, ny tsenan'ny vape ara-dalàna dia afaka nanampy olona an'arivony hampihena ny fiankinan'izy ireo amin'ny nikôtinina sy paraky. Ny sigara mifoka sigara izay misy nikôtinina dia mampidi-doza amin'ny fahasalamana satria simika 70 mahery ao anatin'ireny vokatra ireny no voan'ny kanseran'ny homamiadana. Etsy ankilany, ny rongony dia miteraka fahasimbana kely noho ny sigara sy toaka. Ireo vokatra ireo koa dia tsy mampiankin-doha loatra, mampihena ny fahafahan'izy ireo manana fironana mampisy fahazarana. Ny fikarohana dia nanambara fa ny fampiasana rongony antonony dia azo antoka kokoa noho ny fampiasana akora ara-dalàna hafa amin'ny fotoana fohy sy maharitra.
Ny CDC dia nanatsoaka hevitra fa ny alikaola dia niteraka fahafatesan'olona maherin'ny 35,800 2017 tany Etazonia tamin'ny 114, fa ny rongony kosa tsy namono olona iray akory. Vokatr'izany, ny vokatra alikaola dia misy XNUMX isan-jaza ny mety hisian'ny rongony maty satria ity farany dia manana tombontsoa ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana mahery. Tsy toy ny alikaola, ny fampiasana rongony dia tsy miteraka fihetsika mahery setra na tsy mitandrina. Fa kosa, manampy ny olona tsirairay hampitony ny hozatra sy ny hozatrao izany, ary hitondra any amin'ny fomba fijery tsara sy tsara kokoa.
Araka ny hitanao, ny rongony dia manana fahefana hanova ny fiainan'ny Amerikanina an-tapitrisany. Izy io dia fanafody voajanahary mahery vaika izay manampy amin'ny ady amin'ny aretina, toy ny mitaiza fanaintainana, fivontosana, fitaintainanana, maloiloy ary fahaketrahana. Ireo mpitia fanatanjahan-tena sy atleta dia afaka mampiasa cannabidiol ho toy ny fialan-tsasatry ny hozatra mba hisorohana ny fanaintainana, ny fanaintainan'ny mpiara-miasa ary ny ratra. Ny fananganana marijuana ho ara-dalàna dia afaka manampy olona maro kokoa hampiasa vokatra toy izany mba hitantanana ny soritr'aretin'izy ireo sy ny olany. Nahoana araka ny eritreritrao no tokony ho ara-dalàna ny rongony any Etazonia? Arotsaho ny dinika ary atsangano ny feonao amin'ireo hevitra etsy ambany!
Tags:ara-dalàna rongony, Paositra Sponsored